7 यूरोप मा सर्वश्रेष्ठ नि: शुल्क पैदल यात्रा | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप >7यूरोप मा सर्वश्रेष्ठ नि: शुल्क पैदल यात्रा
ट्रेन यात्रा अस्ट्रिया, रेल यात्रा चेक गणतन्त्र, ट्रेन यात्रा फ्रान्स, ट्रेन यात्रा जर्मनी, ट्रेन यात्रा इटाली, ट्रेन यात्रा स्विजरल्याण्ड, रेल यात्रा गर्नुभएको नेदरल्यान्ड्स, ट्रेन यात्रा सल्लाह, यात्रा युरोप
पढ्ने समय:6मिनेट(Last Updated On: 15/11/2020)
युरोपको कुनै पनि प्रकारको यात्राको लागि सल्लाह र सिफारिसहरूको साथ असंख्य गाईडबुकहरू छन्, र कुनै पनि प्रकारको यात्री. यी गाईडबुकहरू इतिहास र संस्कृति को बारे मा सिक्न को लागी महान हो, तर उनीहरूले तपाईंलाई युरोपको आन्तरिक सल्लाहहरूको बारेमा बताउँदैनन्. नि: शुल्क पैदल यात्राहरू युरोप पत्ता लगाउन शानदार तरीका हो, र तपाईं प्रत्येक यूरोपीय शहरमा नि: शुल्क शहर पैदल यात्रा पाउनुहुनेछ.
आरामदायक जुत्ता लगाउनुहोस्, किनभने हामी यात्राको लागि यात्रा गर्दैछौं7युरोप मा उत्तम निःशुल्क पैदल यात्रा.
1. प्राग सर्वश्रेष्ठ नि: शुल्क शहर पैदल यात्रा
एक अंग्रेजी बोल्ने गाइड तपाईंलाई भेट्नेछ अनानास छात्रावास पुरानो शहर मा को लागी 2.5 घण्टा’ प्राग वरिपरि पैदल यात्रा. तपाईं प्रसिद्ध ओल्ड टाउन स्क्वायरमा पैदल यात्रा सुरु गर्नुहुनेछ, प्रतिष्ठित चार्ल्स ब्रिजमा जारी राख्नुहोस्. पर्यटन केन्द्र बाट शहर को खाजा र पेय को लागी सबै भन्दा राम्रो ठाउँ, प्राग गरेको छ र हैन, तपाईं सल्लाह सिफारिस र कथाहरू को साथ यात्रा समाप्त गर्नुहुनेछ जुन तपाईंले गाइडबुकमा पढ्नु हुन्न.
प्रागको नि: शुल्क शहर पैदल यात्रा एउटा हो7युरोप मा सबै भन्दा राम्रो पैदल यात्रा, विशेष गाइड को कारण. तपाईं प्राग पत्ता लगाउन उत्साहित भ्रमण छोड्नुहुनेछ, र रेस्टुरेन्टहरूको एक महान सूचीको साथ कि अफोर्डेबल लंच मेनूहरू प्रदान गर्दछ. साथै, तपाईं उत्कृष्ट चेक शिल्प बियरको लागि बार-हपिंगको बारेमा सिक्नुहुनेछ, र तेजस्वी प्राग को उत्तम विचार.
2. एम्स्टर्डम, नेदरल्यान्ड्स
एम्स्टर्डमको नि: शुल्क पैदल यात्रा, फ्रीडाम शहर पैदल यात्राको रूपमा पनि चिनिन्छ, सबै खोज र युरोपको सबैभन्दा उदार शहरको मजा लिने बारे हो. भ्रमण daily घण्टाको यात्राको लागि एक्सचेन्ज स्टकमा बैठक पोइन्टबाट दैनिक प्रस्थान गर्दछ, पुरानो एम्स्टर्डमको कल्पित कथाबाट आधुनिक र ट्रेंडी एम्स्टर्डमको कथाहरू.
यी समयमा3रमाईलो समय, तपाईं संसारभरका यात्रीहरू भेट्नुहुनेछ र एम्स्टर्डमको उदार औषधि नीतिको बारेमा सिक्नुहुनेछ, रातो बत्ती जिल्ला, राजनीति, र गाईडबाट ईतिहास’ रमाइलो कथाहरू. साथै, नि: शुल्क पैदल यात्रामा, तपाईं मार्गनिर्देशनबाट भित्री सुझावहरू पाउन सक्नुहुनेछ एम्स्टर्डमबाट सबै भन्दा राम्रो दिन-यात्राहरू र यूरोप भर.
3. बर्लिन सर्वश्रेष्ठ नि: शुल्क शहर पैदल यात्रा
बर्लिनको मूल नि: शुल्क पैदल शहर भ्रमण शहरको ईतिहास पत्ता लगाउने उत्तम तरिका हो, स्थल चिन्हहरू, र केही घण्टामा हाइलाइटहरू. यो जर्मनीको हिप्पेस्ट शहरहरू मध्ये एकमा उत्कृष्ट परिचय यात्राको यात्रा हो, समृद्ध इतिहासको साथ, and politics.
ऐतिहासिक हाइलाइटहरूको साथसाथै, बर्लिनले विभिन्न टुरहरू प्रस्ताव गर्दछ जुन बर्लिनलाई विभिन्न कोणबाट देखाउँदछ; कलात्मक, खन्चुवा, वा पेय पदार्थहरू’ केन्द्रित. मूल बर्लिन निःशुल्क शहर पैदल यात्रामा, तपाईं भ्रमण गर्नुहुनेछ6बर्लिनमा मुख्य स्थलहरूको, र बर्लिनको पर्खाल र संस्कृति पछाडि कथाहरूको बारेमा सुन्नुहोस्.
बर्लिनको मूल नि: शुल्क शहर हिड्ने यात्रा दिनमा दुई पटक छुट्छ, मा बैठक पोइन्टबाट “इच्छा”. गाइड मूल स्वतन्त्र पैदल यात्रा बर्लिन टी-शर्टमा पर्खिरहेको छ र शहर को सर्वश्रेष्ठ पार्टी स्थान सिफारिस गर्न खुशी हुनेछ।, र कसरी गर्ने बर्लिन देखि जर्मनी मा अन्य ठूलो शहरहरु को यात्रा र राष्ट्रिय आरक्षण.
फ्रान्कफर्ट बर्लिन ट्रेन मूल्यहरु
बर्लिन ट्रेनको मूल्यमा लाइपजीग
हनोभर बर्लिन ट्रेन मूल्यहरु
ह्याम्बर्गदेखि बर्लिन ट्रेन मूल्यहरू
4. भेनिस, इटाली
भेनिस इटालीको सब भन्दा सानो शहर हो. तैपनि, यो सजिलै हराउन सकिन्छ जब तपाईं यसको स narrow्कट गल्लीहरूमा वरिपरि घुम्दै हुनुहुन्छ मनोरम वास्तुकला. भेनिसमुक्त शहर पैदल यात्राले तपाईंलाई ईतिहासमा पुर्‍याउँछ, संस्कृति, कला, र मा एक वास्तुकला 2.5 घण्टा यात्रा. जोशिलो गाइड सिमोनाले शहरको बारेमा तपाईंलाई सबै बताउँदछ, भोजन, र रोमान्स को लागी स्पट.
भेनिसको नि: शुल्क पैदल यात्राको आकर्षण सिमोना हो, गाइड, र रमाइलो वातावरण. जस्तोसुकै वर्षाको, मान्छे को संख्या, तपाईंसँग एक शानदार समय हुनेछ र सिफारिसहरूको लोड पाउनुहुनेछ इटालियन खाना र भेनिसमा एप्रोल पेय पदार्थहरू.
मिलान भेनिस ट्रेन मूल्यहरु
बोलोग्ना भेनिस ट्रेन मूल्यहरु
ट्रेभिसोदेखि भेनिस ट्रेन मूल्यहरू
5. पेरिस सर्वश्रेष्ठ नि: शुल्क शहर पैदल यात्रा
पेरिस युरोपमा सबैभन्दा धेरै पर्यटक शहरहरू मध्ये एक हो, संसारमा उल्लेख छैन. जब एफिल टावर र एवेन्यू डेस चैम्प्स-इलिसीहरू पर्यटकहरूको भीडमा छन्, शहरको आइकनिक साइटहरूको जादुई आनन्द लिन गाह्रो छ. तर, नि: शुल्क पैदल यात्रामा, तपाईंको गाईडले सुनिश्चित गर्दछ कि तपाईं यी ल्यान्डमार्कहरूको सबै भन्दा राम्रो पाउनुहुनेछ, र एक धेरै अनौंठो स्टाइल गरिएको यात्रामा.
पेरिस धेरै लुकेका रत्नहरूको घर छ, यसैले नि: शुल्क पैदल यात्राको संख्या अनन्त हो. दिन र रात यात्रा छ, हरेक छिमेकको लागि टुरहरू, पाक कला र कला पर्यटन. तथापि, पेरिस मा सबै भन्दा राम्रो नि: शुल्क शहर पैदल यात्रा छ लुकेका रत्नहरू र गोप्य पेरिस भ्रमण. गाईडले तपाईंलाई लुभ्रेको लुकेका अंशहरूमा लैजान्छ, गुप्त फोटो स्पटमा भवनहरू, भीडबाट टाढा र पेरिसियनको मुटुमा.
6. ज्यूरिख चकलेट फ्रि वाकि City सिटी टूर
महान र रमाईलो गाईडको अतिरिक्त, ज्यूरिखको उत्तम निःशुल्क शहर पैदल यात्रा पाक स्वर्ग हो. किन पुरानो सहरमा हिंड्ने र पारंपारिक शैलीमा ज्युरिख हाइलाइटहरू, जब तपाईं यसलाई दिव्य स्विस चकलेटको साथ मसला बनाउन सक्नुहुन्छ. स्वाद ट्रफल्स, कोको निकासीको बारेमा सिक्नुहोस् र भ्रमण गर्नुहोस् युरोपमा सर्वश्रेष्ठ चकलेटरीहरू तपाईं Lindenhof र ग्रोसमुन्स्टर चर्च प्रशंसा रूपमा.
ज्यूरिख नि: शुल्क पैदल यात्रा छ2घण्टा लामो र हरेक शनिबार प्याराडेप्लट्जबाट प्रस्थान गर्छ, र दर्ता गर्न आवश्यक छैन.
ज्यूरिख ट्रेन मूल्यहरूमा अन्तर्क्रिया
लुसेर्न देखि ज्यूरिख ट्रेन मूल्यहरू
लुगानो देखि ज्यूरिख ट्रेन मूल्यहरू
जिनेभादेखि ज्यूरिख ट्रेन मूल्यहरू
7. भियना, अस्ट्रिया
सुरु गर्न उत्तम तरिका भियना अन्वेषण भियना मुक्त शहर पैदल यात्रा मा स्वागत छ मा छ. लगभग मा2घण्टा तपाईंले भियना र यसको मुख्य स्थलहरूको एक छोटो इतिहास प्राप्त गर्नुहुनेछ, जहाँ तपाईं मरीनाबाट खाजाको लागि भियन्नेस खाना चाख्न सक्नुहुन्छ, भियनाका एक उत्तम गाईडहरू.
दिनको दुई पटक, गाइड तपाईको लागि अल्बर्टिना स्क्वायरमा भियना वरिपरि ऐतिहासिक भ्रमणका लागि पर्खिरहेका छन्.
नि: शुल्क हिड्न यात्राको बारेमा सबै भन्दा राम्रो कुरा मार्गदर्शक हो. जबकि धेरै यात्रा अंग्रेजीमा हो, गाईडले तपाईंलाई उत्कृष्ट अंग्रेजीमा शहरको बारेमा जान्न आवश्यक सबै चीजहरू पुर्‍याउँछ. प्रत्येक प्रश्नको उत्तर दिईन्छ र तपाईं टु end्गो अन्त्य गर्नुहुन्छ आश्चर्यजनक सिफारिसहरूको साथ, उपाख्यान, र शहर को बारे मा जानकारी. दोस्रो उत्तम कुरा त्यो हो7युरोप मा उत्तम शहर पैदल यात्रा, कि तिनीहरू स्वतन्त्र छन्, छोटो र कुराको लागि, र आकर्षक.
युरोपका नि: शुल्क हिड्ने शहर भ्रमणहरू प्रायः सोधिने प्रश्नहरू
के यी नि: शुल्क पैदल यात्राहरू नि: शुल्क छन्?
नि: शुल्क शहर पैदल यात्रा टिप-आधारित छन्. अर्थ, तपाईंले भुक्तानीको लागि भ्रमणमा ठाउँ बुक गर्नु आवश्यक पर्दैन, तर यात्रा को अन्त मा, तपाईंले सल्लाह दिएर महान गाईडलाई धन्यवाद दिनुपर्दछ.
मलाई टिप कति चाहिन्छ?
टिपिंग शहर देखि अर्को शहरमा फरक हुन्छ, तर औसत टिप €5देखि € १ is हुन्छ.
कसरी म गाईड खोज्छु?
नि: शुल्क शहर पैदल यात्रा टूर गाइडहरूले तपाईंलाई केन्द्रीय बैठक पोइन्टहरूमा भेट्नेछन्, र तपाईंले तिनीहरूको शर्टले तिनीहरूलाई चिन्नुहुनेछ. साथै, तिनीहरू सम्भवतः आउँछन् र तपाईंलाई अभिवादन गर्दछन्.
त्यहाँ अ For्ग्रेजी बाहेक अन्य भाषाहरूमा पैदल यात्राहरू छन्?
अधिकांश युरोपमा नि: शुल्क पैदल यात्राहरू अंग्रेजी र स्थानीय भाषामा टुरहरू प्रस्ताव गर्छन्, अन्य भाषाहरूमा केहि यात्राको साथ. यो शहरदेखि अर्को शहरमा फरक हुन्छ, र टूर अपरेटरहरू.
यहाँ मा एक ट्रेन सेव, हामी तपाईंलाई उत्तम युरोपियन शहरहरू र ट्रेन द्वारा हिड्ने टुरहरूमा तपाईंको यात्राको योजनाको मद्दत गर्नमा खुशी हुनेछौं.
के तपाइँ हाम्रो ब्ल्ग पोष्ट ईम्बेड गर्न चाहानुहुन्छ "युरोपमा Best उत्तम नि: शुल्क पैदल यात्राहरू" तपाइँको साइटमा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-free-walking-tours-europe%2F اور- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
तपाईं अंग्रेजी अवतरण पृष्ठ को लागि हाम्रो लिंक भित्र, तर हामी पनि छ https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml, र तपाईं / fr वा / डे र अधिक भाषा गर्न / zh-CN परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ.
#traveleurope #walkingtours citywalkingtourseurope Europefreewalkingtours रेल यात्रा travelberlin ट्राभल प्याराग TravelToAmsterdam TravelToParis